ग्याष्ट्रिकले उग्र रुप लिदै जादा ज्यानै जान सक्छ::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
ग्याष्ट्रिकले उग्र रुप लिदै जादा ज्यानै जान सक्छ
काठमाडौँ– खानपानमा सर्तक रहँदा रहँदै पनि कहिले कहिं ग्याष्ट्रिकले सताउने हुनसक्छ । ग्याष्ट्रिक आम समस्या हो । नेपालमा ग्याष्ट्रिकबाट कयौं मानिसहरु पिडित छन् ।
खसीको खुट्टाको सुप मन पर्छ ? यसरि बनाउनुस घरमै बसेर
स्वाइन फ्लू झन्झन् फैलिँदै, एकको मृत्यु, तपाईसम्म आइपुग्ला सावधान !
स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशनमा चिकित्सकको टोलीद्वारा किरिया घरमै पुगेर नमूना संकलन, स्वास्थ्य परिक्षण